Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey oo ku baaqay in la dejiyo Qoshe-nabadeed ku aaddan xalka Soomaaliya. – Radio Daljir
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey oo ku baaqay in la dejiyo Qoshe-nabadeed ku aaddan xalka Soomaaliya.
Newyork, June 25 – Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ku baaqay is-taraatijiyad nabadeed oo dhamaystiran islamrkaana loo dhanyahay oo loo dejiyo Soomaaliya si loo soo celiyo nabaddii iyo kala danbayntii luntay.
Shirka uu yeeshay golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa waxaa lagu sheegay in loo bahanayahay in xallinta khilaafaadka daba-dheeraaday ee Soomaaliya saldhigna looga dhigo heshiiskii lagu gaaray waddanka jamhuuriyadda Jabuuti sanadkii 2008-dii.
Golaha ammaanka ee QM ayaa sidoo kale soo dhoweeyey heshiiskii Kampala ee sagaalkii bishaan June lagu saxiixay Dalka Uganda, heshiiskaasi oo ku baaqayey in madaxweynaha Somalia muddo hal
sano ah loogu daro waqtigiisa si loo soo afjaro xilliga kala-guurka ah.
Goluhu, waxaa sidoo kale ugu baaqay dawladda in ay wadashaqayn iyo wax wada-qabsi yeeshaan Xukuumadda la filayo in uu soo dhisso R/wasaaraha cusub ee dhawaan la magacaabay Prof. C/weli Maxamed Cali iyo Baarlamaanka Soomaalidu, waxaana goluhu uu dhiiro-galiyey in ka dhisso hay?ado miisaanleh oo sal-ballaaran saami-siyaasadeed muglehna la siiyo haweenka.
Hadalka Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ah mid lagu dardargelinyo firfircoonaanta wajiga cusub ee ay gashay dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, iyadoo muddo sannad ah ay haysato xukuumadda baddali-doonta middii R/wasaare Farmaajo.